I-china eKhaya yokuqina komzimba ibhendi yomzimba wenayiloni yokuxhathisa iyonke intambo yemidlalo yokusebenza kwe-trx yomvelisi kunye noMthengisi | NQ
Kukugqibelele ukuhamba kunye nokusebenza ngaphakathi okanye ngaphandle. Qinisa, ithoni kunye nokukrola umzimba wakho naphi na, nangaliphi na ixesha nangaphantsi kwemizuzu eli-15 ngosuku.
UkuQeqeshelwa ukuQeqeshwa kwe-ATPWAVE kubunzima be-lb enye. Ungayiseta naphi na ngaphantsi komzuzu. Sebenza naphi na kwishedyuli yakho.
Tshisa amanqatha, yakha izihlunu ezijiyileyo: Ngokusebenzisa imithambo engama-300 +, imitya yokunqunyanyiswa iya kukunika iziphumo zomzimba zizonke, ukunceda ukutshisa amanqatha angafunekiyo kunye nokwakha isihlunu esingaxinenanga.
Ngokukhawuleza, kumnandi, kwaye kuyasebenza, i-TRX yakha izihlunu, iyatshisa amanqatha, yonyusa ubhetyebhetye, kwaye iphucula unyamezelo. Ezi ntshukumo zisixhenxe zilula ziya kukuqalisa kuhambo lwakho lokuqina. Ngolungelelwaniso kubude bemitya yakho okanye isikhundla somzimba wakho, uya kuvula inani elingenasiphelo lokuzivocavoca. Ngokubanzi, okukhona iziko lakho lomxhuzulane lisemgangathweni — okanye ngokungakumbi ngokuthe ngqo ngaphantsi kweankile — uya kuba nzima umthambo.
Le mveliso inokuhlanjwa ngomatshini emanzini abandayo. Beka iyunithi kwingxowa yayo enemingxunya (ifakiwe) okanye umqamelo womqamelo ngaphambi kokuba uhlambe ukunqanda imitya exineneyo. Qinisekisa ukuba iindawo ezinyaweni zikhuselekile ukuthintela ukonakala kwemitya ye-nylon. Ukuxhoma okanye umoya owomileyo kuphela.
I-50 × 35 × 30cm, i-15pcs / i-ctn, i-20KG, amaxabiso aphuculwe
Egqithileyo I-logo yangokwezifiso ze-TPE ye-yoga, ibhendi yokuxhathisa irabha, ulolonge umzimba weLatex yasimahla ye-theraband
Okulandelayo: Inkampu yangaphandle yoMkhosi oLungiselelwe ukuLala iDada phantsi kwe-800g Gcwalisa ibhegi yokulala yabantu abadala
Ukuxhathisa iiBhendi zokuzilolonga
Abaqeqeshi boMzimba oQeqeshayo wokuQinisa uMzimba oQinisekayo ...
Hot ukuthengisa mqengqeleki Isondo Ukuzivocavoca Equipment Abd ...
Ihowuliseyili ezemidlalo amagwebu umqeqeshi zobuqu p ...
2021 kwizinga eliphezulu imithambo umsebenzi ...
Ihowuliseyili Lixabiso Spring Adjustable Magn ...
Kwizinga eliphezulu PV ...